Vapinduri ve3D ndiwo matoyi evanogadzira nhasi nevasori. Chishandiso chisingaenzaniswi che DIY uye kumba kuyedza uye zvigadzirwa.
Vanotipa mukana wekuvaka mudzimba medu, panguva ino, zvidimbu izvo zvatinoda zvakanyatsogadziriswa uye nemutengo wakaderera. Pasina kupokana kurota kwemugadziri wese.
Muchikamu chino che 3D Printers isu tinosiya ruzivo nezve akasiyana mamodheru emaprinta pamusika, kana iwe uchida kufukidza nyika yese yekudhinda, tevedzera chikamu 3D kudhinda izvo zvatinazvo
Chii chekutarisa kutenga iyo 3D printa
Kana kuri iko kwekutanga kusangana kwauinako nyika yekudhinda uye 3D maprinta Zvichida nekuti iwe unofanirwa kushandisa imwe kana nekuti iwe unoda kuitenga uye iwe hauzive chaizvo zvaunofanira kutsvaga, ndinokusiira mabhesheni uye hunhu hunhu hwaunofanira kufunga nezvazvo kuti ukwanise kuzvienzanisa uye tsvaga iyo printer inodakadza iwe.
Kuva wechokwadi nhasi Maprinta e3D haazi emushandisi wekupedzisira izvozvi, ndiko kuti, kune veruzhinji. Haina kufanana nechimwe chinhu chinoshandiswa kana gadget, iyo ine ruzivo shoma kana kufarira unogona kuishandisa. Pano iwe unoda rumwe ruzivo kana zvimwe zvinganetsa kuti ugone kuwana zvakanakisa kubva pachigadzirwa.